राजदूत शेर्पामाथि छानविन सुरु, के छ अभियोग ?
काठमाडौं । सरकारले अस्ट्रेलियाका लागि नेपाली राजदूत लक्की शेर्पामाथि छानबिन सुरु गरेको छ। उनीमाथि ‘मानव तस्करीमा सहयोगी’ बनेको गम्भीर आरोप छ।
मुलुकको प्रतिनिधित्व गर्दै सम्बन्ध–सेतु बनेकी राजदूत आफैँ विवादमा परेकी छन्। यसबाट द्विपक्षीय सम्बन्ध असहज बन्ने आशंका पैदा भएको छ।
शेर्पामाथि परराष्ट्र मन्त्रालयले छानबिन थालेको छ। ‘राजदूतमाथि गम्भीर आरोप लागेकाले सत्य–तथ्य खोजी भइरहेको छ,’ परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले भने, ‘हामीले मिहीन रुपमा अध्ययन गरेर यथार्थ बाहिर ल्याउछौं। आरोप पुष्टि भए आवश्यक कारबाही गर्छाँै।’
छानबिनको निष्कर्ष आएपछि मात्रै यसबारे सरकार बोल्ने उनले बताए। ‘सबै कोणबाट छानबिन हुँदैछ। एकतर्फी मात्र होइन, आरोपित र आरोप लगाउने दुवैबारे अनुसन्धान भइरहेको छ,’ ज्ञवालीले भने, ‘छिट्टै टुंगोमा पुग्छौँ।’
‘मुलुककै प्रतिनिधित्व गर्ने गरिमामय पद दुरुपयोग हुनुलाई कांग्रेसले गम्भीर रुपमा लिएको छ,’ उक्त दलले भनेको छ, ‘मुलुकको विशेष जिम्मेवारी पाएको प्रतिनिधिबारे प्रश्न उठेपछि सरकार तत्काल बोल्नुपर्छ।’ आरोप पुष्टि भए उनलाई कारवाही गर्न पनि कांग्रेसले माग गरेको छ। ‘राजदूतलाई तत्काल परराष्ट्र मन्त्रालयमा उपस्थित गराएर छानबिन गर्न र दोषी ठहरिए बर्खास्त गर्ने कदम चाल्न आवश्यक छ,’ कांग्रेसले भनेको छ।
राजदूत शेर्पामाथि छानबिनको प्रक्रियाबारे परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीले केही जानकारी दिएका छैनन्। छानबिनमा परराष्ट्र सचिव शंकरदास बैरागी आफैँ संलग्न रहेको मन्त्रालय स्रोतले बतायो।
शेर्पामाथि के छ अभियोग ?
राजदूत शेर्पालाई उनकै सहयोगी वाङ्छु शेर्पाले मानव तस्करीको आरोप लगाएका हुन् वाङ्छु राजदूतकै सवारी चालक थिए। राजदूतले पैसा लिएर मान्छे लैजाने धन्दा चलाएको आरोप उनको छ। उनले राजदूत र उनका पतिले अमेरिका पठाइदिने भन्दै आफूसँग २२ लाख रकम लिएको बताएका छन्। अमेरिकाको भिसा नलागेपछि राजदूत दम्पतीले थप १० लाख रुपैयाँ लिएर अष्ट्रेलिया लगेको आरोप उनले लगाएका हुन्।
राजदूत शेर्पाले चाहिँ आफू बेकसुर भएको दाबी गरेकी छन्। ‘मैले यसबारेमा सम्बन्धित निकायलाई स्पष्ट पारिसकेको छु,’ उनले भनिन्, ‘मुलुकलाई आँच पुग्ने कुनै काम गरेको छैन। मसँग भन्दा पनि कन्सुलर विभागमा रहेका राजेन्द्र पाण्डेसँग वाङ्छुबारे बुझ्नुहोला।’ आजको अन्नपूर्ण पोष्टमा खबर छ ।
Tagsअस्ट्रेलिया राजदूत लक्की शेर्पा